ရှေးရေစက်ကံ​ဆိုတာနဲ့ ဖူးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရှေးရေစက်ကံ​ဆိုတာနဲ့ ဖူးစာ
Posted by bigbird on Feb 13, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 19 comments
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အရမ်းချစ်ကြတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ဟာ ချစ်ကြိုက်လာကြတာချစ်သက်တမ်း သုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အခါ မှာလက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီး မင်္ဂလာရက်တစ်ရက်ရွေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်…. ကောင်းလေးကတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမယ့်သူ တို့ရဲ့မင်္ဂလာရက်လေးကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပျော်နေရှာတာပေါ့….. .ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေ့မရာက်ခင်မှာပဲ သူ့ချစ်သူကောင်မလေး က တခြားကောင်လေးတယောက်နဲ့မမျှော်လင့်ဘဲ လက်ထပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ကောင်လေးကြားလိုက်ရတယ်….. သူစုံစမ်းကြည့် လိုက်တော့ကောင်မလေးကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလားနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာလို့ သိလိုက်ရတယ်…… အဲ့သတင်းကိုကြားတာနဲ့ကောင်လေးလည်း အရမ်းအံ့သြပြီးအရမ်းစိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ငိုကြွေးနေတော့တယ်…… မကြာခင်မှာပဲကောင်လေးလည်း စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေပြီးအိပ်ယာထဲလဲတော့တယ်…. အချိန်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှ ကောင်လေးရဲ့အခြေအနေဟာပိုပိုဆိုးလာခဲ့တယ်…. ဆရာဝန်ပြလည်းမသက်သာတော့ဘူး…. တနေ့မှာတော့ အသက်အရွယ်အိုမင်းနေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ကောင်လေးရဲ့အိမ်ရှေ့မှာရပ်ပြီးတံခါးခေါက်လိုက်တယ်.. အိမ်ဖော် ကောင်မလေးလည်း တံခါးခေါက်သံကြောင့်ထွက်လာပြီးတံခါးဖွင့်လိုက်တော့ ဘုန်းတော်ကြီးအိုတစ်ပါးကိုတွေ့တာနဲ့စိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ “ကန်တော့ဆွမ်းပါဘုရား” လို့ပြောလိုက်တယ်… ဘုန်းတော်ကြီးကပြုံးပြီးတော့….. “ကိုယ်တော်ကဆွမ်းခံကြွလာတာမဟုတ်ပါဘူး.. ဒီအိမ်မှာလူမမာရှိတယ်ကြားလို့ကိုယ်တော်ကလည်း ဆေးနည်းနည်းကုတတ်တော့လာ ကူညီပေးတာပါဒကာမလေး” လို့မိန့်ကြားလိုက်တယ်… အိမ်ဖော်မိန်းကလေးကလည်း သူဆုံးဖြတ်လို့မရကြောင်းနဲ့ သူမရဲ့သခင်တွေကိုပြန်ပြောကြည့်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြီးအိမ်ရှင်တွေ ကိုပြောကြည့်တော့ သဘောတူခွင့်ပြုတာကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးကို အိမ်ထဲကိုပင့်ဖိတ်ခဲ့တယ်……. ဘုန်းတော်ကြီးအိပ်ခန်းထဲကိုရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်မှာဖြူဖတ်ဖြူရော်နဲ့အရိုးပေါ်အရေတင် ပိန်လှီစွာနဲ့နွမ်းနယ်နုန်းချိစွာလဲလျောင်းနေတဲ့ လူမမာသည်ကောင်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်…. အိမ်ဖော်မိန်းကလေးလည်းဘုန်းတော်ကြီးအတွက် သာက်တော်ရေတခွက်ပေး လိုက်ပြီးလူမမာကုတင်ဘေးမှာပဲထိုင်ခုံတစ်လုံးစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်… ဘုန်းတော်ကြီးကလည်းအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့…. ” တော်တော်အခြေအနေဆိုးနေတာပဲ ” လို့ရေရွတ်လိုက်တယ်….. လူမမာကောင်လေးကလည်းစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်စွာနဲ့ပဲဘာမှမကြားသလို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေနေတယ်…… ဘုန်းတော်ကြီးလည်းသူလုပ်သင့်တာတွေလုပ်ပြီးတော့… ” ဒကာလေးက တော်တော်သနားစရာကောင်းတယ်…. မယုံရင်မှန်ထဲကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ” လို့မိန့်တော်မူပြီးကောင်လေးအိပ်ခန်းထဲက ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်တစ်ချပ်ဆီကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်… ကောင်လေးလည်းလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဲ ငေးငေးငိုင်ငိုင်နေနေရာကနေတစ်ချက်မှန်ထဲကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ.. မှန်ထဲမှာသူ့ချစ် သူကောင်မလေးပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်…. သိတ်မကြာခင်မှာပဲကောင်မလေးပုံရိပ်ကေ၀၀ါးပျောက်ကွယ်သွားပြီး ပင်လယ်ကမ်းခြေတခု ပုံပြောင်းလဲသွားတယ်…. အဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးလူအသွားအလာမရှိဘူး…. . လူမမာကောင်လေးကမှန်ထဲ ကပုံရိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေစဉ်မှာပဲ မိန်းကလေးအလောင်းတစ်လောင်းဟာ လဲလျောင်းနေတဲ့အနေအထားနဲ့ ကမ်းခြေမှာရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်….. ခဏကြာတော့လူတစ်ယောက်ဖြတ်လျှောက်လာတယ်… သူကအလောင်းကိုရွံရှာစွာကြည့်ပြီး လျင်မြန်စွာဖြတ် လျှောက်သွားတယ်….. အချိန်အတော်လေးကြာတော့နောက်လူတစ်ယောက် ဖြတ်လျှောက်လာပြီးအဲ့ကောင်မလေး အလောင်းကိုတွေ့ သွားပြန်တယ်… ဒီလူကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အပ်ါရုံအင်္ကျီကိုချွတ်လို့ခြုံပေးပြီး ခရီးဆက်ထွက်သွားတယ်…. အဲ့လိုနဲ့နောက်ထပ် အချိန်တော်တော်လေးကြာလာတော့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြန်တယ်… ဒီလူကအပေါ်ရုံခြုံထားပြီးလဲလျောင်းနေတဲ့ပုံစံ ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးခြုံထည်ကိုလှန်ကြည့်တော့မိန်းကလေးအလောင်းကိုတွေ့သွားပြီး အရမ်းသနားစိတ်ဝင်လာကာမြေမြုပ်ပေးလိုက်ဖို့ဆုံး ဖြတ်လိုက်တယ်… ဒါပေမယ့်သူ့ဆီမှာမြေကျင်းတူးဖို့ဘာပစ္စည်းမှပါမလာဘူး…. နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအသုံးပြုဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…. လူရွယ်ဟာသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မြေတွေကိုယက်ပြီး တဖြေးဖြေးချင်းတူးလာလိုက်တာညနေစောင်းအချိန်မှာမိန်းကလေး အလောင်းကိုမြုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ကျင်းတစ်ကျင်းကိုတူးလို့ပြီးသွားတယ်…. အဲ့လူလည်းမိန်းကလေးအလောင်းကိုကောင်းမွန်စွာမြုပ်နှံ ပေးခဲ့ပြီးခရီးဆက်ထွက်ခွာသွားတယ်… အဲ့ဒီနောက်မှာမှန်ထဲမှာမိန်းကလေး အလောင်းရဲ့မျက်နှာပုံပြန်ပေါ်လာပြီး အဲ့မျက်နှာကနေသူ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်…. လူမမာကောင်လေးလည်း အလွန်အမင်းအံ့သြနေစဉ်မှာပဲမြေမြုပ်ပေးတဲ့လူရွယ်ရဲ့ မျက်နှာပြန်ပေါ်လာပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာအဖြစ်ပြောင်းသွားပြန်တယ်… အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မှန်ထဲကပုံရိပ်တွေအကုန်ပျောက် ကွယ်သွားခဲ့တယ်…. ကောင်လေးလည်းအံ့သြစွာနဲ့မင်သက်နေတုန်းမှာပဲဘုန်းတော်ကြီး ကခုလိုပဲမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တယ်… ” ခုဆိုရင်ဒကာလေးလည်းသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်တယ်…အဲ့မိန်းကလေးအလောင်းကဒကာလေးရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးဖြစ်တယ်.. ဘ၀တစ်ခုမှာသူမရဲ့အလောင်းကို မြေမြုပ်ပေးတဲ့ကုသိုလ်ကံရေစက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူငယ်ဟာဒီဘ၀မှာကောင်မလေးနဲ့ လက်ထပ်ပေါင်းသင်း ခွင့်ရခဲ့တယ်… ဒကာလေးကတော့သူမရဲ့အလောင်းကို အပ်ါရုံနဲ့လွှမ်းခြုံပေးခဲ့တဲ့ရေစက်ကံကြောင့်ဒီဘ၀မှာ သူမနဲ့ သုံးနှစ်တာချစ်ခင်ခွင့် ရခဲ့တယ်..ခုသုံးနှစ်ပြည့်လို့ရေစက်ကုန်ချိန်မှာခွဲခွာရတယ်” ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာ ကောင်လေးလည်းအမြင်မှန်ရပြီးနားလည်သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်းမှာကောင်လေးလည်း ပြန်လည်ကျန်းမာလာပြီး လောကီကိုစွန့်လို့သင်္ကန်းဝတ်သွားတော့တယ်… ပုံပြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ.. ဆိုလိုချင်တာကတော့ ကျွန်မတို့လူသားတွေအချင်းချင်းဒီဘ၀မှာအဖေ၊ အမေ၊ ဆွေမျိုးညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊ ချစ်သူ၊ ရန်သူအဖြစ်နဲ့ တွေ့ဆုံတော်စပ်ပတ်သက်ခွင့်ရကြတာဟာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မဟုတ်ပါဘူး…. ဘ၀တစ်ခုခုကပြုခဲ့တဲ့ရေစက်ကံကြောင့် သာဤမျှများပြားလှသော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ တွေ့ဆုံရင်းနှီးချစ်ခင်ခွင့်ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်… အဲ့လိုပဲရေစက်ကုန်ချိန် ရောက်ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့မှဆွဲထားလို့မရပဲသေကွဲ၊ ရှင်ကွဲ မျိုးစုံနဲ့ခွဲခွာကြရမှာပါ….. အဲ့ဒါကြောင့်ခုမခွဲခွာရခင်အချိန်လေး မှာမ်ိမိနဲ့ ပတ်သက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ တတ်နိုင်သလောက်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ.. မေတ္တာတွေပေးနိုင်သလောက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုး စားသင့်ပါတယ်….. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကိုဘယ်အချိန်မှာ ရေစက်ကုန်လို့ခွဲခွာကြရမယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်…… ဒီဘ၀မှာခင်မင်ခွင့်ရသောသူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက်အမှတ်တရ…….
ကျွန်တော့ mail ထဲမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ စာရေးသူပိုင်ရှင်ထံမှ
စာဖတ်ရတာ ငုတ်လိုက်တာ နော် စာလုံးတွေက ညာဘက်မှာ သွားပုန်းနေကျတယ် ရဲခေါ်ထုတ် မှ ထွက်လာမယ်နဲ့ တူတယ် :[
စာတွေ ပုန်းနေတာ စာရေးသူ ပြန်ဝင်ပြီး စပေ့ခြားရင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။
ရေးထားတာနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သဘောကျပါတယ် .. ဒါပေမယ့် news ဆိုတာထဲ ၀င်နေတာ သဘာဝ မကျပါ .. ကိုယ်လဲ အစမှာတုန်းက .. မတင်တတ်လို့ .. ဒီလိုပဲ news ထဲမှာ ထည့်ခဲ့ဘူးပါတယ် ..
နောက် ဒီလိုမျိုးကို creative စသဖြင့် တစ်နေရာရာမှာ ရေးရင် ကောင်းမလားလို့ ..
ကောင်လေးကို မယားတရူးရူးနေသူ၊ ဘုန်းကြီးကိုတော့ သူတပါးအားနဲချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူလှည့်ဖျားသူတဲ့… အဲဒါသဂျီးပြောတာ သူနဲ့ရှင်း……
ကျုပ်ကပဲ..စာတွေစပေ့ထည့်..။ ကက်တဂရီ ပြင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဟိုဘ၀..နောင်ဘ၀..ဘေးဘ၀တွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး..။ အမြင်မတော်လို့ပါ..။
အဲဒါ..ဟိုဘ၀..နောင်ဘ၀..ဘေးဘ၀တွေကြောင့် ထပ်လုပ်မဲ့သူပေါ်လာမှာပဲဆိုပြီး ..နောင်တင်တဲ့စာတွေပစ်မထားပါနဲ့နော်..။
နောင်တခေါက် ..တင်ရင်.. စည်းကမ်းလေးဖတ်ပြီး .. သေသေချာချာလုပ်ပေးပါနော..။
လူငယ်တယောက် … အရှုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေသလို ..ခံစားရတယ်..။
မြန်မာလူငယ်ဆိုတာ ..ဒီလိုကြီးဖြစ်နေကြရင်..တိုင်းပြည်အနာဂါတ်တော့ ..တော်တော်ရင်လေးစရာပါပဲ..။
ကျုပ်သာ.အဲဒီလိုကောင်လေးမိဘဆိုရင် .. အဲဒီအိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးနဲ့ ပေးစားလိုက်တယ်..။
အနည်းဆုံးတော့ … မယတရုးတော့ ပျောက်သွားမှာပဲ..။
အဲဒီဘုန်းကြီးကိုလည်း .. နောင်အခါဆို ..အခုလိုသားမျိုးဆီအပင်ပန်းခံကြွပြီး …မှန်တွေဘာတွေမှာ ..နိမိတ်တွေပြမနေပါနဲ့..။
လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်သွားဖို့ စပွန်ဆာပေးမယ်..။ အဲဒီမှာ ..မျက်လှည့်ပြစားဖို့… အကြံပေးမှာပဲ..။
တနှစ် သန်း၁၀၀ အေးလေးရှာရနိုင်တယ်..။
စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့လူငယ်တိုင်းကို .. အာဖရိကတိုက်က ..ငတ်နေတဲ့ကလေးတွေဆီ ဗေါ်လန်တီယာ အကူလုပ်ဖို့ .. တလ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ပေးပြီး လွှတ်ပေးလိုက်မယ်..။
သဂျီးတော့ အိမ်ဖော် ကောင်မလေး ကို မတရား ပြုကျင့်မှုနဲ့ တရားစွဲ ခံရတော့မယ်။ အာဏာသုံးပြီး မတရား လင်ပေးစားမှု နဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သလို.. အဲဒီ အချိန်မှာ အိမ်ဖော် ကောင်မလေးကို ဒေါ်လာ သန်း၂၀ လောက် လျော်ကြေးပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကို ကိလေသာ ပျော်ပါးချင်အောင် ဂွင်ဖန်မှုနဲ့ သံသရာ အတွက် စိတ်မအေးရ ပြန်ဘူး။
သဂျီးလျော်တဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ ရွာထဲက ကလေးတွေ အတွက် အပျော်တမ်း စာရေးဖို့ ဖောင်ဒေးရှင်း ထောင်ပေးလိုက်မယ်။ ကလေးတွေ ပျော်ရွင်စွာ ရေးချင်ရာ ရေး.. ပျော်စေသတည်းပေါ့ကွယ်။
သဂျီး ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ စာရေးနေတဲ့ သူ ဆိုတော့ ဖောင်ဒေးရှင်း အကြောင်း ဆက်မရေးတော့ဘူး။
ရွာထဲ..အပျိုဂျိုးတွေအများကြီး… သူဂျီးသားဆို .. ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်..။
တခြား ..ဟိုဟိုဒီဒီ.. အပျော်အပါးမစဉ်းစားပဲ.. ပရိတ်ချည်း လွှတ်ရွတ်နေသူတောင်ရှီတယ်..။
အာဖရိတိုက်ကကလေးတွေ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အောင်… သာသနာပြုပေးဦးမှာ … လုပ်ပေးဦးမှာ ..။
အိမ်ဖြူတော်ခေါ်သွားပြီးသာ ..အိုဘားမားကို မှန်တွေဘာတွေ..ထောင်ပြီး .. အဲဒီလိုလုပ်ပြလိုက်…။ သူလည်း … ဗုဒ္ဓဘာသာ ..တန်းပြောင်း… ။ သူ့အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်တွေတန်းပြောင်း..။
ရွာသားထဲက ..ငရဲသွားမဲ့သူတွေကို ..အမြတ်တင်… ပြန်ရောင်းစားလို့တောင်ရမယ်..။
ရွာထဲက အပျိုကြီး အပေါင်းတို့ အတွက် သတင်းကောင်း
သဂျီးသားတော် နှပ်ချီး တွဲလောင်း အတွက် ကြင်ယာဖက် ရှာဖွေ နေပါတယ်။
သဂျီးက သူပိုင်တဲ့ လပ်ဗီးဂက်စ် က လောင်းကစားရုံ ၁၅လုံးကို တခါတည်း ချွေးမလောင်းအား အမွေလွဲပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အသက်အာမခံကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၅သန်း ကိုလည်း မကြာခင် ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဂျီးက ကုသိုလ်တွေ အများကြီး ရပြီး နတ်ပြည်တက်ချင်နေသည့် အတွက် မကြာခင် နတ်ရွာစံ နိုင်အောင် ပြုလုပ်တော့ မည် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ချွှေးမလောင်း ရှာဖွေပြီး နှပ်ချီးတွဲလောင်း သတိုးသားလောင်းကို နေရာချထားပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အခွင့် အရေး လက်မလွတ် ကြရအောင် အကျိုးမျှော် နိုးဆော်ပါသည်။
သဂျီးသား အောင်ပု အတွက် မိန်းမ စပ်ပေးမလို့.. မုန်းစရာ ကောင်းတဲ့ အချက် ၁၀ချက်တော့ ရှိတယ် လက်ခံ နိုင်မလားဟင်။ အဆင်ပြေလို့ ပွဲဖြစ်ရင် ကောင်းကောင်းချီးမြှောက်နော်။
အောင်ပုက မွေးစားသားလား သားအရင်းလား …
သဂျီးသားအရင်းက ချာတူးလန် မဟုတ်ဘူးလား …
ဆူးကိုကြည့်ရတာ တရုတ်လူမျိုးပဲဖြစ်ရမယ် … ပွဲစားလုပ်တာ ၀ါသနာပါနေတာတွေ့ရလို့ …
ပွဲစားလုပ်ရင် တပွဲ ဖြစ်ရင် အနိမ့်ဆုံး ၁၀သိန်းကနေ ၁၅၀လောက် အထိ ရတယ်တဲ့ ကြောတာဘဲ။ ၁၅၀ လောက် ရချင်ရင်တော့ ယူအက်စ်က ဘာမသိ ညာမသိ လူတွေကို ဒီက လူနဲ့ စပ်ပေးလိုက်.. ဒီကနေ လိုက်ချင်လို့ ငန်းငန်းတက်တဲ့ မိဘတွေ ကျေကျေ နပ်နပ် ပေးစားပြီး ပေးလိမ့်မယ်။ သဂျီးသား ဆိုတော့ ပိုကောင်းကောင်း ရမှာပေါ့
အချစ်အတွက်အသက်ပင်သေသေဆိုတာ အခုခေတ်မှာ ပျက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ
အားလုံးသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘ၀မြင့်တက်ဘို့အတွက် လုံးပန်းနေကြတာဆိုတော့
ဘ၀မှာသေးငယ်တဲ့အစ်ိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အချစ်အတွက် ဘ၀အပျက်မခံကြတော့ တာကို ၀မ်းသာစရာတွေ့နေရပါတယ် သဂျီးရေ
ဒါဆိုရင်လဲ ဆူး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း လုပ်ပါလား … ယူအက်စ်ကအပိုင်းကို သဂျီးနဲ့ ညှိလိုက် … အထက်မြန်မာပြည်ကို ကိုပေါက်နဲ့ ချိတ်လိုက် … အောက်မြန်မာပြည်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း …
ပွဲခရရင် အကြံပေးခလဲ မစအုန်းနော် ..
လူကုန်ကူးမှု နဲ့ လာငြိနေလို့.. အတွဲလိုက် သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ပါလာလို့.. မလှတာ လူတွေ သိကုန်အုန်းမယ်။
အဲဒီတော့လည်း တိုင်းကျော်ပြည်ကျော် ဖြစ်သွားတာပေါ့ ဆူးရယ်။ ကျော်ကြားမှုဆိုတာ လွယ်လွယ်ရတာမှတ်လို့။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မမ က ကော အပျိုကြီးလား..
မြန်မာ့မီးရထားရဲ့ လျှိူ့ဝှက်ချက်တွေ ဖော်ထုတ်လိုက်ရမလားးD